Itoobiya oo sheegtay in Abgaal ay Farmaajo u sheegeen inuu ka fiirsado halkan arrin - Caasimada Online
Home Warar Itoobiya oo sheegtay in Abgaal ay Farmaajo u sheegeen inuu ka fiirsado...
Itoobiya oo sheegtay in Abgaal ay Farmaajo u sheegeen inuu ka fiirsado halkan arrin
Muqdisho (Caasimada Online) – CDRC oo ah hey’ad bil kasta soo saarto joornaal ay kaga hadleyso baaritaano iyo warbixino isla markaasna laga leeyahay dalka Itoobiya ayaa qoraal dheer oo 10 bog ah kasoo saartay doorashadii Farmaajo, Magacaabista Ra’isulwasaate Kheyre, caqabadaha hor taagan iyo sida ay noqon doonaan wasiirada.
Haddaba Hey’addaan ayaa ka dhawaajiyey arrin aad loola yaabay markii ay sheegtay in Beesha Abgaal ay Farmaajo uga digtay inuu ka fiirsado Magacaabista golaha wasiirada.
Hey’adaan ayaa sheegtay in Odayaal, Xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeedo Beesha Abgaal ay kulan la qaateyn Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxayna ka dhawaajiyey in intii uu socday kulankaas laga wada hadlay qaabka ay noqon doonaan wasiirada lasoo dhisayo.
Sida ay sheegtay Hey’adda Beesha Abgaal ayaa madaxweynaha u sheegtay inuu ka fiirsado magacaabista wasiirada iyo qaabka loo qeybsan doono haddii kalana ay midaas ka dhallan doonto caqbaad.
Hey’adda ayaa sheegtay in Abgaal ay bilaabeyn inay cuna qabateyn saaraan Dakadda Muqdisho kadib markii ganacsato beeshaas kasoo jeedo ay ka dhawaajiyeen inay dib u dhisi doonaan Dakadda macmalka ah ee Ceel Macaan.
Hey’adda ayaa arrintaas ku tilmaamtay inay tahay tallaabo lagu wiiqayo awoodda dowladda dhexe isla markaasna waxayna ka dhawaajisay arrin lala yaabay oo ah in beeshaan ay tallaabadan u qaadeyso kadib markii loogaga guuleystay doorashadii ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Hey’adaan laga leeyahay dalka Itoobicya ayaa sheegtay in il gaar ah lagu hayo magacaabista golaha wasiirada midaasna ay ka dhallan karto caqabado ay la kulanto dowlada Farmaajo.
Warbixinada ay soo saartay hey’adaan oo aad u badan waxaana mid mid idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay.